समय सन्दर्भ : खस्रा खरेल :: Press Chautari ::
समय सन्दर्भ : खस्रा खरेल
नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारी एसएसपी-'रमेश खरेल' । खरेल प्रहरी सेवाको क्रममा जहाँ-जहाँ गए त्यहाँ भुँईचालो ल्याए । उनले बर्दीको कहिल्यै अपमान गरेनन् । बर्दी लगाएरै अन्याय, अत्याचारको बिरुद्धमा बुट बजारी रहे । जनताको पक्षमा अहोरात्र खटिरहें । अस्ति मात्रै त हो, जब उनले प्रहरी संगठन भित्रको सत्य सार्वजानिक गरे अनि आँधी आयो । सुनामी आयो । थाह छैन यसले कस-कसलाई बगाउँछ कुन्नी ?
नेपाल प्रहरीका लाखौं प्रहरी वलले खरेलले जस्तै बर्दी लाएकाछन् । “सत्य सेवा सुरक्षणम्”को उस्तै बुट पेटी कसेकाछन् । तथापी खरेलथोकका खस्रा खरेल त्यस्ता सिपाही दरिए जसले ज्यूँ-हजुरी गर्दै कहिल्यै चिल्ला चाक्ला बोल्न चाहेनन् । जनताले तिरेका करबाट अन्नपानी भरेका उनी कतै कर्तव्यबिमुख हुन मानेनन् । नीति र नियमको बिरुद्धमा उनले आफ्ना साप'हरुको चाकडी गर्न जानेन्न् । ठूला-ठूला हाकिम र मन्त्रीहरुलाई चाप्लुसीको स्यालुड गर्न उचित ठानेनन् । र सत्य बोली दिए-“नेपाली प्रहरीभित्र ठूलो घुषखोरी छ ।”
उनले दिएको अभिव्यक्ति लगतै यता प्रहरी संगठनको छानो हल्लियो । डग्मगायो सम्मानित संस्था । हड्बडायो गृह मन्त्रालय । एआईजी बन्ने धाउन्नमा ब्रिफकेश बोकेर मन्त्रालय धाउने डिआइजी सापहरुको कान ठाडा भए । त्यसपद्धि चेन अफ कमाण्डबाट चल्ने नेपाल प्रहरी एसएसपी खरेलको बिरुद्धमा खनिए । त्यत्तिबेला एक्लो उभिएका खरेलको पक्षमा यत्तिबेला केहि प्रहरी संगठनका उच्च अधिकारीहरु सँगै उभिएकाछन् । र सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनता खरेलकै पक्षपाती भएर जताततै छ्वातछुल्ल भएर पोखिएकाछन् -देशै भरि । र देश भन्दा नि धेरै पर-पर सम्म पनि ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट काठमाण्डौं प्रहरी प्रमुखको दरबन्दी च्यापेर आफ्ना हाकिमको अगाडि सवा ६ फिटको शरिर तनक्क तन्काएर “हवस् साप” भनेर महानगरिय प्रहरी कार्यालय छिरे लगत्तै खरेलले त्यस्तै खस्रो बोलेका थिए । एउटा इमान्दार राष्ट्र सेवक जहाँ जहाँ पुगे उनी जनताका पहरेदार बने । पञ्चायतकालमा रातो टोपी लगाएर छिप्पेको भाले र खसी मास्दै हिड्ने “पुलिस”को भय र त्रासको हाउँगुजीमा बाँचेका आमाहरुको लागि खरेल साथी जस्तै भए । छोरा जस्तै बने । हातमा छडी बोक्ने, मानौं कि उ सबथोक् हो भन्ने भ्रम पालेर गाउँ-बस्तीका सोझा सीधा छोरी चेलीलाई बलत्कार गर्ने कुनैबेलाका “परहरी” को कालो अनुहारलाई बिर्सेर तिनै चेलीहरुले प्रहरी खरेललाई माईती मानें । आफ्नो ठानें । कर्तव्यनिष्ठ खरेल जहाँ जहाँ गए न्याय, शान्ति र सुरक्षाको पहरेदार बनें । सधैं जनताको पक्षमा उभिए । त्यसैले त उनी चर्चाको शिखरमा उक्लिए । जनताको प्रिय पुलीस बनेर “सत्य सेवा सुरक्षणम्” को शीर उँचो बनाई रहे । अनि त भन्न मन लाग्छ -“एसएसपी खरेल यो देशको सबै भन्दा सच्चा-इमान्दार राष्ट्र सेवक हुन् ।”
खरेलले तीतो ओकलेर जुन अभिव्यक्ति दिए त्यो प्रहरी संगठनभित्रको पदीय मर्यादा विपरीत नै सहि । तर के प्रहरी संगठन भित्र प्रोमोसनको निम्ति ब्रिफकेश अनिवार्य छ त ? बर्षौं सेवा गरेर खुँइलिएको काँधमाथि एउटा फुली जोड्नलाई पैशाको बिट्टा चाहिन्छ भन्ने कुन नेपाल प्रहरीको नीति अन्तर्गत पर्छ ? जनता यत्ति सोधी रहेछ । त्यत्तिका संख्यामा रहेका प्रहरी मध्ये एउटा रमेश खरेलले सत्य बोलेर घुसखोरीलाई बढावा नदिने अनुनय गर्दा किन र्थथरी काँपेको होला नेपाल प्रहरी ? कति कमजोर धरातलमा गाँडिएको छ त्यो “सत्य सेवा सुरक्षाणम्” को खाँबो ? किन चोरको खुट्टा काँट भन्दा माथि उचालिदैछ देशको सुरक्षा संयन्त्र ? आफ्नै कर्मचारी माथि किन डाह गर्छ राज्यको बलियो मन्त्रालय ?
सरकार ! जनताले यसको जवाफ पनि मागेको हो ।
२५ बर्ष भन्दा लामो समय आफ्नो इमान नबेचेंका खरेल बाँकी दिनहरुमा पनि बेमान गर्न सक्दैनन् । यो जनताको बुझाई हो । आईजिपीको रोलक्रममा सबैभन्दा नजिक पुगेका एसएसपी रमेश खरेल ब्रिफकेश बिना अघि बढुन् । पौने ३ करोड नेपाली जनताले यत्ति भनेको हो ।
बुधवार, २०७१ जेष्ठ १४ गते २३:५३ / Wednesday, May 28, 2014 11:53 pm
Hana...yo " satya sewa surakshyam" ko naau ma ghuss dine ra ghuss khane haru lai k po garau hau!